Ihe Mere E Ji Kpoo Paris na Ihe Ọjọọ | Otu Di na Nwunye
July 6, 2018 / 10 Comments
Ọ bụghịzi Hemingway si Paris.
Ọ bụghịzi oge ahụ a na-ahụ maka ọmarịcha iko champeenu na Can-Can Girls, backlit na swirling nke na-ese siga na obi ụtọ. N'ebee ka ịma mma ahụ na-agagharị, anyị amaghị; ikekwe oge nke oge na oke mmiri, ma ọ bụ ma eleghị anya na ịdabere n'obodo ahụ na ihe ndị mere ochie na-adịghị arụ ọrụ na ndị bi ugbu a. The Paris anyị nwere na mmadụ dị nnọọ iche na nke nke misty, imalorn oyiyi nrọ nke na akwụkwọ akụkọ ọma. Nye anyị, o gosipụtara onwe ya dịka onye ezi omume nke onwe ya, nke mebiri ihe ọ na - adịbu, nke dị nro, nkwarụ, na mkpasu iwe.
Nke a abughi otu n'ime ihe ndị ahụ dị egwu, nkwurịta okwu abụọ nke Paris nke na-emesị kwalite ịma mma na icheiche nke obodo na njedebe. Aghaghị m ime ihe n'eziokwu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga njem nleta maka Paris maka ụbọchị site na Eurostar ma ọ bụ banye n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Gare du Nord n'ozuzu ya, dị ka ọtụtụ ndị, ọ dị mkpa ka ị mata ihe ị ga-atụ anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ná ntụkwasị obi ma nwee obi ụtọ onwe gị, ọ bụrụgodị na naanị awa ole na ole.
Amaara m na ọtụtụ nde mmadụ nwere ahụmịhe dị iche iche n'obodo a, ma dị ka onye mbụ na-abịa (dị ka ọtụtụ ndị) ọ dị mkpa ịkọwapụta onwe gị na ezigbo foto ka ndị ọzọ oge mbụ nwere ike ịkwado maka onyinyo ha nwere ike ịchọta n'ime ya. Obodo nke Ìhè!
Ahụmahụ Paris anyị
Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị mma n'oge njem anyị bụ iji mee ka ọtụtụ ebe anyị nwere ike nwee ọtụtụ awa anyị nwere n'ime obodo ahụ. Ya mere, iji bụrụ ndị ezi omume, anyị agaghị ahụ ụlọ mịpụtara osisi ma ọ bụ ụlọ kọfị na-atụgharị anya na ebe ndị dị nso. Anyị gara n'ebumnuche n'ihi obere oge anyị nwere, na-atụ anya njem nleta ahụ dịka ọtụtụ ndị ọzọ: nkà, akụkọ ntolite, njem na Seine na iko ole na ole nke mmanya uhie. Ihe anyị chọpụtara metụtara ihe niile ahụ, ma na ụzọ a na-atụghị anya ya.
Echiche a na-atụghị anya ya banyere Ụlọ Elu Eiffel.
Na-abịa n'etiti ụtụtụ na Gare du Nord na ụgbọ oloko si London , anyị wee banye n'ime oké osimiri nke ndị na-agagharị agagharị, ka a na-atụ anya ya. N'agbanyeghị ìgwè mmadụ ahụ, anyị jisiri ike chọpụta ihe anyị chere na anyị ga-agagharị n'obodo ahụ - igwe mpempe akwụkwọ maka Metro. Ebe anyị nwere ego ego ole na ole ma ọ bụ ego ole na ole, anyị nwere obi nkoropụ ịhụ na kiosk a na-anabataghị nke ọma nabatara naanị ya mgbe ọ na-echere ogologo oge n'azụ ndị ọbịa. Mgbe anyị gbanwere ego, anyị zụtara tiketi abụọ Metro. Anyị ga-echekwa ego anyị gbanwere.
Ntuziaka doro anya: Gare du Nord, dị ka ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị n'obodo ahụ, na-ebo gị ebubo iji ụlọ ndozi ahụ mgbe ị rutere, ya mere tinye ego nke ego euro maka nke a.
Metro n'onwe ya, ikwesị ntụkwasị obi, otu n'ime ndị jupụtara n'ụba na sardine-nwere ike ịchọta ịchọta anya anyị nwetụla. Ọbụna agafe ihe a ga-atụle oge elekere anya, gburugburu 11am, ndị mmadụ na-etinye onwe ha dị ka ehi na-enweghị ihe mgbochi, ụgbọ okporo ígwè jupụtara na graffiti-littered ma na-agafe n'ebe ọ bụla ha họọrọ. Mgbe ndị isi na-atụgharị ma na-adọta ìgwè mmadụ ahụ nakwa na enweghi akara aka (anyị na-asụ asụsụ French zuru oke ... ọ bụ ihe mgbagwoju anya signage dịka asụsụ karịa), anyị hapụrụ atụmatụ anyị iji soro ndị mmadụ na-agagharị na-agagharị na ala ma na-esi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ emeghe kama, na-atụ anya ịgafe obodo ahụ dịka anyị mere ọtụtụ oge na obodo ndị ọzọ dị mkpa.
Na-eje ije n'okporo ámá
Maka ahụmahụ anyị mbụ na boulevards Parisis nke dị n'èzí Gare du Nord, a na-ekele anyị site na ihe m nwere ike iche na ụmụaka abụọ dị afọ asatọ na-ejide obere bọtịnụ, na-arịọsi anyị ike ka anyị debanye ma nye "ego maka ndị ogbi". Mgbe anyị jiri nwayọọ jụ ma gbanwee ịga n'ihu, ọ bụghị nanị na ha ruru maka akpa azụ nke Justin (anyị maara na idebe akwụkwọ anyị na ngwongwo anyị) kama, mgbe ha na-achọtaghi ihe ha ga-ezu ohi, ha tiri mkpu ma dọgbuo anyị ka anyị na-agafe ala. n'okporo ámá na-achọ ụlọ Paris Paris. O doro anya na iwu ndị dị n'obodo ahụ nyere ndị na-enweghị ike ịbanye na izu ohi, nkwụsị, na ihe ndị dị otú ahụ, na-enweghị obere ego. Buru ụzọ dọọ gị aka ná ntị!
Ntuziaka Ntuziaka: Na-ebu akwụkwọ paspọtụ gị, ego, tiketi ụgbọ oloko na akwụkwọ ọ bụla na a aka ukwu a na-etinye ya n'okpuru uwe elu gị n'ihu. Pickpocketing jupụtara na Paris na e nwere ọbụna ihe ịrịba ama na-adọ gị aka ná ntị ka ị mara ya n'ọnụ ụzọ nke Louvre.
Emela ihe ọ bụla n'ime akpa gị n'ebe ọ bụla na Paris - ọbụnadị na Louvre!
Nkwụsị mbụ anyị (mgbe anyị jere ije site na mpaghara Stalingrad nke Paris) wee ghọọ Galeries Lafayette, ụlọ ahịa mara mma nke dị n'ime ụlọ ebe anyị na-asụ ngọngọ n'elu ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị nwere na anyị ga-abụ ebe mbụ anyị ga-akwụsị. Ebe ọ bụ na obere ụmụaka na-eji obere akpa na-awakpo anyị, anyị chere na ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ abụọ nwere ike ime ka anyị nwee ahụmahụ mbụ!
Onye ọbịa anyị ji obi ụtọ kelee anyị ma nọdụ na windo na-ele n'okporo ámá, nke bụ nkwekọ na-enye obi ụtọ site na atụmanya ndị anyị mere ọhụrụ nke ụbọchị ahụ. Ihe oriri ahụ dị mma dị ka mmanya ahụ. Ọ magburu onwe ya ma ọ bụ àgwà ọma, ma ọ na-enwekwa ihu ọkụ na-adọrọ adọrọ megide din na ájá nke ogbe ndịda. N'ụzọ dị mwute, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na anyị na-ekwu okwu na French mgbe anyị na-enye iwu (na mgbe ụlọ oriri na ọṅụṅụ adịghị na ọrụ ọ bụla), onye ọbịa ahụ nwere ike gwụrụ nke ndị ọbịa si mba ọzọ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ nwere iji gaa na tebụl anyị ruo mgbe anyị kwụrụ ụgwọ ego. N'ihe uto nri e mere maka ya! Anyị kewara otu efere ravioli nke ọma ma nwee iko mmanya ole na ole tupu ịlaghachi n'okporo ámá ndị dị omimi.
Ntuziaka Ntuzi: Ọ bụrụ na ị si na United States, enwere ike iji ya tinye 15-20% n'elu mkpokọta taabụ. Anyị ka na-edeba na Europe ma otu n'ime Euro atọ bụ ụkpụrụ, ọ gwụla ma ịnọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-adịghị eri nri, ebe 5% nke taabụ bụ omenala. N'agbanyeghị ihe ọ bụrụ, ọ bụrụ na ọrụ gị dị mma, jide n'aka na ị ga-eme ihe dị ukwuu ị chere na ọ dị mma!
Ọ na-atọ ọchị iji ghara ịchọta ya.
M na-atụ anya na anyị ọzọ ga-aga ije na boulevard na mara mma Opera National de Paris ga-ebelata m obi ụtọ, ma ọ dị mwute na ọ bụ nnọọ ọzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ echiche nke obi mara mma nke Paris. N'oge a na-arụsi ọrụ ike n'ụbọchị na-agafe na ndagwurugwu ahụ, otu onye na-enweghị ebe obibi nọ ọdụ na-arịọ ka akpa ya na akpa ya, blanketị, yana pusi na obere nkịta nọ n'akụkụ ya, na-ehi ụra. N'ụzọ doro anya, na obodo ukwu ọ bụla anyị na-eche ihu eziokwu nke onye na-abaghị uru na ndị na-achọta onwe ha enweghị ihe maka nri na ebe obibi, ọ bụ eziokwu zuru ụwa ọnụ na nke anyị na-anwa inyere aka, ma ọ bụrụ ma mgbe anyị nwere ike. Nsogbu dị na nke a bụ, anụmanụ ndị dị n'okporo ámá dị n'akụkụ nwoke a dị adị, ma o doro anya na ọ dịghị ndụ.
M na-arụrịta ụka n'eziokwu ma m ga-ede banyere nke a, n'ihi na dị ka anụmanụ na-ahụ n'anya, ọ na-ewute m nke ukwuu nke na-eme ka m cheta na-eme ka m gee (na-ekwu na ọ dịkarịa ala) ma nwee olileanya na ihe m hụrụ bụ ihe efu, ma anyị abụọ hụrụ ya, na mwute ikwu, ọ bụghị. Enweghị m ike ịghọta ọha mmadụ nke na-enye ohere ngosi a na-asọ oyi, ma karịsịa nke na-eme onwe ya ka ọ bụrụ "cosmopolitan" dika Paris. Anyị na-aga n'ihu tupu m rie nri ehihie m.
N'inye ya n'azụ anyị, maka oge ahụ, anyị mere na ebe a chọrọ site na Paris Opera House, ebe mara mma, iji jide n'aka. Ndị mmadụ nọ na-anọdụ ala na ntinye na ntinye, na ọtụtụ foto dị mma, ma anyị enweghị ike ịchọta ụzọ iji gaa ụlọ ahụ n'ezie. Oge mbụ anyị nọ ebe ahụ, ejiri m n'aka na ọ bụ njehie onye ọrụ, n'eziokwu, mana anyị nwere oge na-achọ ịchọta ebe ndị njem nleta na-ahụ maka oge ahụ.
Naanị ihe anyị na-eme bụ ịchọta ụbọchị - njedebe na njedebe.
Mgbe anyị kwụsịrị na nzọụkwụ Opera, anyị hụrụ nke ọma otu n'ime ọtụtụ nlegharị bọs na-ekpuchi anya nke nwere nkwụsị na-agafe n'okporo ámá. Na-agba ọsọ iji jide ya (ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka tiketi na bọs n'onwe ya, ọ dịghị mkpa ka ị gaa online), anyị na-agbadata ụdọ okporo ụzọ iji banye n'ụgbọ. Nke a bụ amara nzọpụta anyị maka ụbọchị ahụ!
Ntugharị ọsọ ọsọ: Ụgbọ ala ndị na-agba ọsọ na Paris na-eburu ma na-ahapụ ọtụtụ ebe dị gburugburu obodo ahụ. Chọta nke kachasị mma maka gị ma jiri ohere ahụ mee ihe! Ọ na - eburu ihe ọ bụla 15 minit site na ebe ọ bụla ị ga - enwe ike ịga na nke gị.
Ụgbọ njem ụgbọ ala a nke obodo a na-eburu gị gaa isi ihe dị na Paris. Otu n'ime nkwụsị mbụ anyị bụ Carousel na-esote Ụlọ Elu Eiffel. Obodo na osimiri na-ele anya na ụgbọala ahụ dị mma, Carousel n'onwe ya bụ ihe na-echetara gị oge ndị Parisian Can-Can na-eme egwuregwu n'oge gara aga. N'ịnọ n'ebe ahụ n'oge oyi, ọ dị ala, Otú ọ dị, anyị nọrọ na bọs maka mmasị a karịsịa iji zere iku oyibo (ọ bụghị n'ezie, ma ọ bụ nnọọ ụda).
Ihe na-adọta mmasị ọzọ bụ ihe dị mkpa eiffel Tower onwe ya. Ọ bụ nnukwu ihe owuwu, na-adị mma magburu onwe ya maka usoro na akụkọ ihe mere eme, yana ihe ijuanya maka ọmarịcha agba odo-acha ọbara ọbara - nke m ahụtụbeghị n'ụzọ ziri ezi na foto! N'oge ezumike m ga-ekwu na ahụmahụ nke nanị ịnọdụ ala na lawn n'okpuru ya na baguette na karama mmanya bụ ọnụahịa nke tiketi Paris, ma n'oge oyi ... ọ dị mma nke dị anya! Ịgagharị na ya na-agụnye ọtụtụ awa etinyere na akara, nakwa, nke mere na ọ bụghị na kaadị anyị. Ma, nanị iji lee ya anya megide oge oyi oyi bụ ahụmịhe n'onwe ya.
Iji nweta Eiffel Tower ahụ ka ọ dị mma ka anyị nwee ike inye oge anyị n'obodo ahụ, anyị si n'ụgbọ njem ahụ gbapụ n'oge na-adịghị anya ka anyị wee nwee obi ike na ụkwụ na mmiri ozuzo ma weghara ya na akụkọ ihe mere eme nke oge a na fim. Akwụsịtụla ịhụnanya nke oge ahụ, n'ụzọ dị mwute.
Ụlọ elu Eiffel ka na-ahụ ụzọ, n'agbanyeghị gburugburu ebe obibi.
Mgbe oge ruru oge ịhapụ nkwụsị ọzọ na njem ụgbọ ala anyị, Justin anọworị ọdụ, mana ka m gbalịrị ịbanye n'ime ụgbọ ala ahụ, onye ọkwọ ụgbọala mechiri ụzọ m aka wee malite ịchụpụ. Ọfọn, Justin - yana ndị njem ndị ọzọ - gwara ya nsogbu ahụ ma kwụsịrị ịmeghe ọnụ ụzọ ka e wee ghara ịdọrọ m ụzọ. Yikes. Na-ekwu na nke a bụ ebe nchekwa na-adọrọ mmasị nye m, ọ bụ ezie na ọ bụ ntakịrị nsogbu na oge ahụ! Jide n'aka na ị na-ama onye ọkwọ ụgbọala anya nke ọma tupu ị maliteghachi na ya!
Na na Louvre!
Ihe ọzọ na-esote anyị malitere na Pont des Arts, nke dị n'okporo ámá si Louvre, nke bụ ebe a na-akpọ "Uche Ịhụnanya", ebe ndị obodo na ndị nleta na-etinye ihe mkpuchi ka ọ bụrụ ihe dị n'akụkụ akụkụ nke mmiri. Ugbu a na-adaghachite n'ihi ihe ndị mere nchekwa, anyị nwere ike ịhụ aka mbụ ma na-emetụ n'ahụ tupu anyị agafee Louvre.
Ọ bụ ezie na ị na-agbalị ịchọta The Louvre dị ka onye mbido oge mbụ site na ịga ije n'okporo ụzọ bụ isi ị nwere ike ịchọta onwe gị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ọ bụ ama isi abanye na-etiti nke square ma zonahụ lelee ma ọ bụrụ na ị na-eje ije site n'Ọdọ Mmiri Ịhụnanya. Mgbe anyị na-aga ebe ahụ, anyị kpebiri ịhapụ obodo anyị ma rịọ (na French) nke na-edu Louvre, ma na-eju ya anya nke ukwuu site na nzaghachi ya na omume enyi ya; aka ya nyere anyi aka n'enye anyi otuto. Eleghi anya ọ ga - egosi na ọ bụrụ na ịchọọ ìhè na Paris, ị ga - akwụsị ịchọta ya!
Ụlọ ihe ngosi nke Louvre n'onwe ya nwere ntinye egwu. Mgbe anyị na-arụ ọrụ n'ụbọchị ahụ ọ bụ ihe dị mma iji mee ka akụkụ nke ụlọ ahụ dị elu ma hụ na iko ndị a na-atụgharị anya na-atụ anyị ka anyị banye. Maka naanị Euro iri na abụọ, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị na Mona Lisa, ma Venus de Milo, otu n'ime ọrụ ndị a kacha mara amara nke Grik oge ochie.
Ihe oyiyi ahụ, na-etinye aka n'èzí n'ihu ọha, ọ dị gị nso ka ị na-ekiri oge ochie na oge mbụ ya. Mona Lisa, ebe ọ bụ onye a ma ama, dị nnọọ obere karịa ka ọtụtụ ndị na-atụ anya ya! Nkịtị a na-emechibidoro na ihe mgbochi mgbochi (nghọta), eserese a ka bụ ihe mara mma. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a ma ama, ọgaranya Louvre na-enweghị atụ, na ihe kachasị mma nke ụbọchị anyị n'obodo.
Ntuziaka di oke anya: cho anya otutu ndi mmadu na Louvre nakwa otutu uzo di n'ulo oru ihe nka. Agaghị m ekwuputa akụkụ a nke ahụmahụ nke ihe ngosi nka, ma ọ bụrụ na ị bụ onye nleta ọhụrụ, ọ dị mkpa ịmara na ụlọ mposi adịghị (olee otu m si etinye nke a ...) n'oge a. E nwere ọtụtụ ndị nleta na njem na bọs na Louvre enweghị ụlọ ndozi zuru ezu mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike, karịsịa maka ndị inyom. Naanị ọsọ ọsọ!
Na-ekele onye obere Mona Lisa
Mgbe anyị gafere Louvre, anyị ga-ejide ụgbọ ala anyị na Gare du Nord maka ụgbọ okporo ígwè anyị laghachi London. Njem nlegharị anya anyị na-ejighị mee ihe n'oge ụfọdụ n'ihi ihe ụfọdụ, n'ihi ya, anyị kpebiri ịchọta ụgbọ ala dị na mpaghara ụgbọ okporo ígwè ka ọ na-apụ site na gburugburu Louvre. N'ụzọ dị mwute, ọkwọ ụgbọala ahụ dị nnọọ ukwuu ma hụ ka anyị na-agba ọsọ mgbe bọs! Ọ kwụsịrị iji bulie anyị ka ọ na-apụ maka ebe ọzọ na-aga, nke ukwuu nye anyị enyemaka, na, n'ihi na erughị asatọ Euro, anyị nwere ike ịlaghachi na ọdụ ụgbọ elu dị na bọs dị ọcha na ndị enyi.
Mgbe anyị na-agbago n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ, anyị nọdụrụ n'akụkụ windo, na n'agbanyeghị mmiri ozuzo, njem ahụ na-adịghị mma na-aga n'obodo dị na Paris nọ na-emetụ na udo na nke mbụ ya, ebe a na-agbanye ọkụ n'okporo ámá na-eme ka ụlọ ahụ dị elu ma na-ezo mmiri dị na ya. ụzọ ndị na-agba egwu.
Nanị Ikpeazụ mmanya anyị na Paris
Na-esote Gare du Nord bụ ụlọ oriri na-edozi French nke na-enye ihe nchịkọta zuru ezu gụnyere mkpụrụ osisi na mmanya, atụmanya dị iche iche nke onye ọbịa maka oge mbụ, dị ka anyị. Anyi choro na agu aguu anyi n'oge ahu ma naele anya ka anyi merie aru anyi na iko wine, ya mere anyị ji bata n'ime ya. Ọrụ ahụ enweghị atụ ma jiri obiọma nabata. Na njedebe nke ogologo ụbọchị, ọ bụ mgbanwe na-enye obi ụtọ - ihe nkesa enyi na tebụl okpokoro dị na windo jupụtara n'akụkụ nkuku. Anyị nyere iwu nri na ọtụtụ iko mmanya tupu anyị amalite njem anyị. Mkpịsị ụkwụ anyị na cheese crere nwere obi ụtọ ma na-ekpo ọkụ, anyị nwekwara ụlọ mmanya-acha ọbara ọbara ịmalite - n'ezie! Ndị ọrụ na-echere na-echebara echiche ma jiri nghọta na-eme njem nleta, na-asụ Bekee nakwa French. Na, n'agbanyeghị na ha na-arụsi ọrụ ike n'uhuruchi ahụ, ha nyere anyị ka anyị were foto anyị (ọtụtụ n'ime ha, iji jide n'aka na ọ dị mma) iji dee ụbọchị ahụ n'isi ụbọchị anyị!
Oge 8 na Paris na-eme ka otu onye ṅụọ.
Ebe Mmetụta Na-atụgharị Anya na Olileanya
Igwe dị jụụ, mmiri ozuzo, ọkụ na-eme ka ụmụ egwu dị n'okporo ámá. Olileanya bụ na obodo a karịrị tiny Mona Lisa na efere nke tọrọ ụtọ ma mee ngwa ngwa ugbu a na usoro nchịkọta ahụ furu efu n'oge na n'efu.
Ebe a na-ekpo ọkụ n'ebe a na-edebe ihe ọṅụṅụ, na-elegharị anya n'etiti igwe ojii na etiti abalị nke ihe dị ugbu a na-achọsi ike ịghọ ihe dị n'oge. Anya ile anya site na windo ugbo nleta bu ugbua Ememe Achịcha na Paris ohuru efuola.
E nwere ọtụtụ ihe Paris na-echebeghị ma weghachi. O nwere ike ọ gaghị agafe otu ụzọ ahụ dịka o mere mgbe ndị na-ese ihe na-ekpuchi ihe ntụchi ahụ ma na-ejikọta ụmụ chi, ma ọ bụrụ na ha eleghara ntụrụndụ mbụ ya, na njedebe nke ụbọchị, nzuzu. Iji mee ka à ga-asị na iko-acha-acha acha acha ọcha-ihe ndị anyị tụlere Paris na-esiteghị n'eziokwu ma jigide obi bụ ihe efu.
Ọ ga-anọgide la vie en rose, ma olee mgbe ìhè pink ga-alaghachi?
Category: Europe, France, kasị Popular, Nyocha, Nhazi njem Tags: arc, North Station, louvre, maka lisa, Paris, Venus, mmanya
← Free na ihe efu na-eme na Barcelona
Ụkwụ Na-atụ Ụjọ? Chọta Amụma Mgbochi Tupu Gị Flight →
10 Comments na "Oge 8 na Paris: Nnyocha nyocha"
Adịghị m akwado Paris. Ọ bụ ihe ruru unyi, na-esi ísì ọjọọ, ndị mmadụ na-ekwutọkwa okwu ọjọọ! Ekwenyesiri m ike na ndị ọzọ ga-enwe ahụmahụ ka mma ma enweghị m. Enwere m obi ụtọ na ị kọwapụtara nsogbu ndị a na-eche na ha nwere! Ị gaghị eche ihe mere m! Enwere m ego m zuru ezu na ekwentị m na akpa m. Obi dị m ụtọ na edere m paspọtụ m n'ime mke m (nwere ikpere ikpere n'elu) iji jide n'aka na anaghị m atụfu ya. Obi di m ezigbo iwe. O kwuru n'egbughị oge na mgbe ahụ, anyị agaghị ala azụ. Enwere m obi ụtọ ịhụ na ị naghị ekpuchi ebe dị ka ọtụtụ ndị njem ndị ọzọ na-eme.
Ah, paspọtụ n'ime buut bụ ihe ọzọ dị mma na-atụgharị na pickpocketers! Ịkpọ oku!
Enwere m obi ụtọ na ị na-eme ihe n'eziokwu banyere Paris !!! Achọpụtara m na ndị mmadụ dị mma mgbe m nọ n'ebe ahụ - ọ na-enwe obi ụtọ. Ma ụgbọ oloko (ị kọwara ha n'ụzọ zuru oke) bụ ndị na-esi ísì ụtọ, nnukwu ntụpọ, na ihe nchịkọta-azụ bụ ihe jọgburu onwe ya! Enweghị m ike ịsị na m hụrụ n'anya ma ọ bụ lekọta Paris. Obodo Crappy!
Obi dị m ụtọ na ị kwenyere, Meagan! Eji m n'aka na ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya, ma ọ bụghị anyị. Ihe ọ bụla akụkọ ndị a kọrọ akụkọ ha na Paris bụ, ha nile bi na Prague ugbu a, haha.
Anọ m na Paris maka ọtụtụ afọ n'enweghi Paris ị na-akọwa, ma eleghị anya n'ihi na m na-ezere ìgwè mmadụ na njem nleta.
Ikekwe, David. Ọ dị mma, Paris bụ otu n'ime ebe ndị mmadụ hụrụ n'anya ma ọ bụ na-ahụghị ha n'anya nke ukwuu ... Eji m n'aka na anyị ga-enye ya ohere ọzọ n'oge ụfọdụ!
Enweela m France ugbu a, ma enwebeghị m ike ịhụ Monalisa, 🙁 Ekele maka isiokwu a, Amaghị m otú m ga-esi na-aga njem na-enweghị ntụziaka dị oke mma.
Iji mee ihe n'eziokwu, Julie, ọ dị mma ịhụ ya, mana ọ bụghị nke ahụ dị mma. Ọ gbara ọtụtụ narị mmadụ gburugburu, ọ dịkwa obere. Anyị nọrọ ma ọ bụ otu minit n'ebe ahụ, n'ihu ihe osise ahụ, na ọtụtụ.
N'ezie? Na foto o yiri ka ọ bụ ihe efu, ekele maka azịza ya, M na-arụ ọrụ dị ukwuu ma achọrọ m ịchọta ebe izu ike iji nwee obi ụtọ na ezumike, mmasị gị na blog gị, ekele m. Enweelarị m aka.
ekele maka inye ndepụta a nke a na-enye m aka nke ukwuu ma na m nyochaa ebe niile dị adị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ụgbọelu ụgbọ elu maka ụgbọ elu ụgbọelu, pịa igwefoto nọmba kọntaktị + 1-800-874-8529.
Ụzọ Kwesịrị Isi Mee Vietnamese Beef Pho
Categories Họrọ AtiyaụlọAfricaAirlinesAmericanAntarcticaArgentinaArmeniaArts & MusicAsiaAustraliaAustriaAzerbaijanBackpackingBelgiumBoliviaBonaireBotswanaBrazilBritishCaliforniaCaribbeanCentral AmericaChileColombiaDi na NwunyeE Si Nweta kaadịOkpughariCubaculinaryCzech RepublicỤbọchị NjemDenmarkEgyptEmploymentEnglandEuropeNjem EzinụlọNjem ỤmụakaFloridaNri na ihe ọṅụṅụFranceEbe nkiri ebe nkiriIhe efuFrenchFrench GuianaGeorgiaGeorgia (Europe)GermanGermanyGreeceGreekNjem OtuGuatemalaOzi ndị aHawaiiHealthHispanicHistoryNjem njemHondurasHotelsEnyemaka mmadụHungarianHungaryIcelandIllinoisIndiaIndianIndonesiainspirationalIowaIrelandIrishItalianItalyItinerariesJapanKenyaỊmụ asụsụNjem LGBTMadagascarMaineIme EgoMalaysiaMaldivesMassachusettsMexicoMexicoMichiganObere-BlogMinnesotaMonacoMongoliaMoroccokasị PopularMozambiqueNamibiaNetherlandsNevadaNew YorkNew ZealandNewsNorth AmericaNorth CarolinaNorth DakotaOceaniaOregonOutdoorsParaguayPennsylvaniaPeruPhilippinesPhotographyPolandPortugalPuerto RicoEzi ntụziakaNyochaỤzọ NjemRomaniaRomanianRussiaRussianScotlandScottishSelf ImprovementSEOSeychellesNjem Njem OchieSouth AfricaSouth AmericaSouth DakotaSpainEgwuregwuSurinameSwedenSwitzerlandTanzaniaTechnologyTennesseeomenalaTransportationNjem ịde blọgụNjem ego njemEme njemNjem GearNhazi njemTunisiatoro toroUncategorizedUnited KingdomUnited StatesUruguayOnye anaghị eri anụVenezuelaVermontVietnamVietnameseVirginiaWashingtonWashington DCWisconsinZambiaZimbabwe
Archives Họrọ net June 2019 Ka 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 Ka 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 Ka 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016
Asia Barcelona biya bonaire di na nwunye Dublin England Obodo Békè florida nri France Germany Greece akụkọ ihe mere eme hotel Hotels Ireland Italy Lisbon London Mexico Miami Music New York North America n'èzí Paris Peru uzommeputa Ezi ntụziaka review reviews Rome santorini South America Spain ihe na-eme Transportation Travel njem njem Nhazi njem United Kingdom United States Vienna ebe ịnọ